सिन्धुपाल्चोकमा फेरि अपहरण गरि गाडीभित्र डेढ घण्टा सम्म सामूहिक ब'ला'त्कार ! - Sidha News
सिन्धुपाल्चोकमा फेरि अपहरण गरि गाडीभित्र डेढ घण्टा सम्म सामूहिक ब’ला’त्कार !
सिन्धुपाल्चोक — छिनछिनमा आँसु पुछ्दै प्रहरीकै बीच बस्दा पनि तर्सिर्रहेकी छन् । मंगलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय चौताराको महिला सेलमा रहेकी उनी मौन थिइन् तर बेलाबेला झस्किरहेकी देखिन्थिन् । गत असोज १५ को घटनाले उनी सम्हालिन सकेकी छैनन् । एक छोरा र एक छोरीकी आमा उनी सामूहिक बला’त्कारको सिकार भएकी हुन् ।जिल्ला प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार जुगल गाउँपालिका–३, तेम्बाथानकी ती महिलामाथि असोज १५ मा जुगलकै मन्जेमा राति चार जना पुरुषले बोलेरो जिपभित्र सामूहिक बला’त्कार गरेको खुल्न आएको छ ।
बला’त्कारअघि उनलाई अपहरण गरिएको थियो । बला’त्कृत महिलाले आफन्तको आड पाएपछि मात्रै सोमबार प्रहरीमा जाहेरी दिएकी छन् । त्यस दिन उनी परिवार नियोजनको सुई लगाएर जलबिरेबाट घर फर्किंदै थिइन् ।साँझको समय पैदल हिँड्दै गरेकी उनले जसोतसो कात्तिकेमै पुगेपछि बास पाइन्छ भनेर सबैतिर सोधपुछ गरिन् । सबैले कोरोना संक्रमणको त्रासमा बास दिन नमानेपछि उनी मन्जेगाउँ पुगिन् । कुचुती भेगस्थित बाटोमा हिँड्दै थिइन्, एउटा मोटरसाइकल तीव्र वेगमा आयो ।
मोटरसाइकललाई बाटो छोडिदिएर कुना लागेकी उनलाई दुई युवाले जबर्जस्ती मोटरसाइकलमा राखे । ‘साँझ छिप्पिसकेको थियो । मुख थुनेकाले आफूलाई फुत्काउनै सकिनँ । दुई जनाले मुख थुनेको थुनै गरेपछि बेहोस भएछु,’ उनले भनिन्, ‘होसमा आउँदा मध्यरात भइसकेको रहेछ । एउटा बोलेरो जिपभित्र आफूलाई नाङ्गै पाएँ ।’ होसमा आउँदा उनका अघि गाउँकै चिनजानका दुई पुरुष थिए ।
उनले आफूलाई छोडिदिन अनुनय–विनय गरिन् । मध्यरात बोलेरोको सिसा लगाएकाले उनको चित्कार कसैले सुनेनन् । मुख थुनेर चारै जनाले पालैपालो बला’त्कार गरे, उनी रोइरहिन् । ‘डेढ घण्टापछि बला’त्कार गरेको कुरा कसैलाई भनेमा मारेर खोलामा फालिदिने धम्की दिएर बोलेरोबाट कपडासहित फालिदिए,’ उनले भनिन् ।
बला’त्कृत उनी फालिएको झाडीबाट बिस्तारै उठिन् । सकसमै कपडा लगाएर बिस्तारै गाउँतर्फको बाटो लागिन् । उनीहरू पछि लागेर माफी मागेजस्तो पनि गर्दै थिए, तर उनी रुँदै उकालो लागिरहिन् । उनले चिनेका दुई पुरुष गोन्जे र गोन्डे गाउँका हुन् । पीडित महिलाका आफन्तका अनुसार बला’त्कारमा संलग्न दुईमध्ये एक जना केही महिनाअघि मात्रै दुबईबाट गाउँ आएका थिए भने अर्का गाउँमै बस्थे ।